Woopra, ukubeka iliso kwiindwendwe ngexesha langempela-i-Geofumadas
Woopra, ukubeka iliso kwiindwendwe ngexesha langempela
Epreli, 2011 ezintsha, Internet kunye neBlogs
Ukuyizalisekisa, kufuneka ubhalise, ubhalise iiwebhsayithi esizithemba ukuba zijonge kwaye zifake iskripthi kwisifanekiso sesayithi. Inkonzo ikhululekile ukuya kwii-30,000 zokujonga ikhasi, ngoko kukho iiplani ze-49.50 zonyaka, ezihamba phambili.
Phakathi kwezinto ezinokuthi zenziwe kunye Woopra Zizo:
Yazi apho iindwendwe zivela khona Akunakwenzeka ukwazi ubunikazi kodwa kukho izinto ezinomdla ezifana nesixeko esivela kuyo, uhlobo lwesiphequluli, i-IP yoluntu, ukuba ufike njani kwisayithi kunye nenkqubo yokusebenza.
Ukuchonga iindwendwe ezithile ngelebula, ngoko uyazi xa bebuya.
Yenza izilumkiso ukwenzela ukuba isandi okanye ifowuni ekhuphayo iqhutywe, xa kwenzeka isiganeko esithile, njengale: Xa kufika isivakashi, kwilizwe elithetha isiSpanish, ngegama elingundoqo "Landa i-AutoCAD 2012". Ukuba isicelo sedeskithophu sisetyenzisiweyo, sinokuba yiphaneli ekupheleni kwe desktop.
Unokwabelana ngamanani kunye nomnye umsebenzisi okanye uphakamise iingxelo zemihla ngemihla. Oku kuhle, ukuba bakwazi ukwabelana ngayo nenkampani okanye ubuchwepheshe obuzisa nathi iinkonzo ze-SEO.
Yenza iilebula zeendwendwe kwibalazwe, ngeempawu ezithile ezifana nexesha elichithwe kwisayithi, ukuba ungumvakatsha omtsha, njl. Bangabonakala nakwiGoogle Earth.
Ngaphandle koko, kukuvumela ukuba usebenze ityhu kwiziko lewebhu, apho ungabona khona iindwendwe ezixhunyiwe kwaye, ekugqibeleni, yenza ukuba ukhethe ukuthetha nomntu ophethe iphepha elitholakalayo. Oku kungenziwa kusebenze okanye kwenziwe ngokwezifiso, kodwa kulungile xa umntu oxhasa, okanye umvakatye, kufuneka adibanise ngexesha elithile.
Ngoko ke, ukuba ufuna ukuthetha nombhali weGeofumadas, kufuneka ubone ukuba kule tbhu ibonakala iyatholakala.
Ukongezelela, ngeenkcukacha ezigcinwe ungabonakalisa iigrafu ukuze ukwazi izimo, amagama amaninzi asetyenziswayo, amazwe kunye nemizi apho iindwendwe zivela khona. Kulo nxalenye, akenzi nto i-Google Analytics ayikwazi, nokuba yinto engalunganga ukuba idatha ayigcinwanga isigxina, inguqulelo yamahhala iyisindisa kwiinyanga ze-3, ezihlawulwa ukusuka kwi-6 ukuya kwi-36 inyanga.
Kodwa i-Woopra yenza ezinye izinto esingazange siziphumelele nge-Analytics, okanye ubuncinane kungekho ngokufanayo, njengoku:
Ukwazi apho abantu bashiye khona kwisayithi, yintoni esinika ukuba luncedo, ngamaphepha athile esiwabhekisela kuyo kwiikhonkco zethu okanye izaziso.
Yazi ukuba yiyiphi iikopi esiyibangeleyo, mhlawumbi kwisayithi okanye izixhumanisi zangaphandle. Oku kunokuba luncedo xa sikhuthaza isofthiwe kwaye sifuna uqaphile ukuba sikhuliswe rhoqo xa ikhutshwe.
Yazi umphumo othile kwinqaku eliye lalinalo, kuxhomekeke kumhla nexesha elipapashwe ngalo.
Kwakhona kunokwenza ukwazi ukuba kutheni iifoto zifikile iindwendwe, apho ndifumene ukuba iGeofumadas inendawo ekhangazelayo ngegama elithi "imifanekiso engamanyala" kwiGoogle Images, Ups!. Ndandikhumbula ukutyelela ezininzi kwiposi Topography, imifanekiso kuphela.
Eyona nto ifanelekileyo, ivumela ukuhlalutya iingqameko ezingekho phantsi kwee-spammers, ezivame ukubonakaliswa ngezenzo ezigqithisileyo zezenzo. Kuphela kufuneka uqaphele isivakalisi, kwaye ifreyili ibonisa indlela ekhoyo ngayo kwiintsuku ezahlukeneyo, nangona ishintshile i-IP, uWoopra unxulumana naye njengomvakatye; oku kwenza kube lula ukulivala kunye neWp-Ban okanye iplagin efanayo.
Ngethuba elinokuba lunikwe izihlunu, kunokwenzeka ukuba kwenziwe amanqaku amaninzi. Ngokomzekelo, yiyiphi iphepha elona abaninzi abasebenzisi kwisixeko esithile baye babona. Okanye nawaphi amaphepha atyelela iindwendwe ezivela eMexico ezachitha ixesha elingaphezu kwesigama seyure ukukhangela iphepha. Okanye ubone ikhalenda yokutyelela, ukuhlunga ezo ndwendwe eza kufika kathathu ngosuku olufanayo; mfutshane, oku kukhangeka kakhulu.
Kodwa eyona nto inomlutha kukujonga iindwendwe ngexesha langempela. Unokufunda okuninzi koku: amasiko endwendwe, indlela yokuziphatha yokukhangela, ukubonwa kwabasebenzisi abathembekileyo kunye namaxesha osuku lokufikelela rhoqo. Kukwenziwa nezicelo ze-SEO kunye nokulandela umkhondo we-intanethi wentengiso. Utyelelo lukaGoogle lilingana "neeNdwendwe", oko kukuthi, utyelelo lwemihla ngemihla olwahlukileyo; Ngokungafaniyo nayiphi na i-5 eyahlukileyo, loo nto iyavakala kuba uGoogle kufuneka apase uhlaziyo lonke inani lemizuzwana, ngelixa oku kuphila. Ezinye ezi zibalo zibizwa ngokuba "ZiTyelelo" ezi zeeseshoni, kubandakanywa ukuba undwendwe luza kwindawo engaphezulu kwesinye kanye ngemini, oku kuyasebenza kakhulu kwaye ekugqibeleni kukho "umbono wephepha" olingana nembono zephepha.
Landela yakho CEO kwi-Twitter.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Geofumadas: iminyaka eyi-30 ye-AutoCAD kunye ne-Microstation
Post Next Imizuzu, iingxaki eziqhelekileyoOkulandelayo "